Sarin’ny barea, autocollant, “face painting” Nifandrombahana teny Anosy
Nangotraka ny fitsenan’ny Malagasy ny lalao nifanandrinan’ny ekipam-pirenena Barea sy ny
Tonizia, omaly alina. Saika nifandrombahana avokoa mantsy ireo karazana sary, kapa, kojakoja maro samihafa misy ny sary sy ny anaran’ny Barea omaly tontolo andro teny an-tsena. Ho an’ny teny Anosy manokana dia ny sarin’ny Barea namidy 400 Ar isanisany no tena nifampitadiavana, indrindra fa ho an’ny mpianatra. Toraka izany koa ny sarina sainam-pirenena autocollant fanao amin’ny fiarakodia. Tsy latsa-danja amin’ireo ny face painting nandokoana tarehy miloko fotsy, mena, maitso izay nilaharana mihitsy teny Analakely. Nanomboka tamin’ny 2.000 Ar dia efa nahavita izany miankina amin’ny haben’ny sary raha 5.000 Ar kosa no lafo indrindra. Ho an’ny tee-shirt kosa indray dia tsy naharaka ny mpivarotra noho ny fitombon’ny mpividy.